चितवन दूधमा आत्मनिर्भर बन्दै, औपचारिक घोषणाको तयारी – Chitwan Post
भरतपुर । चितवनमा दूध उत्पादनको मोटामोटी तथ्यांक हेर्दा केही वर्षदेखि नै आत्मनिर्भर भइसकेको पाइन्छ, तर औपचारिकरुपमा घोषणा हुन सकेको थिएन ।
यतिबेला चितवन जिल्लालाई दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा गर्न चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ दुई महिनादेखि दौडधूप गरिरहेको छ । दूध र दुग्धजन्य पदार्थको वास्तविक तथ्यांक लिन विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरु बनाइएको छ ।
‘हुन त, यो घोषणा गर्ने काम स्थानीय सरकारले गनुपर्ने हो, तर पनि हामी स्थानीय सरकारकै समन्वयमा जिल्लालाई दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्दैछौँ’, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेले भने, ‘हामी चितवनका सबै स्थानीय तहमा पुगेर अध्ययन गर्दै तथ्यांक लिइरहेका छौँ ।’
उनका अनुसार यही जेठ १८ गते दूध दिवसका दिन चितवनलाई दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । हुन त, यसअघि नै साविक जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले चितवनलाई दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा गर्ने पटकपटक प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर बजेट अभावलगायतका कारण देखाउँदै कार्यान्वयन गरेको थिएन ।
जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले बुधबार दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणासम्बन्धी विशेष अन्तक्र्रिया कार्यक्रम नै राखेर सुझावहरु संकलन गरेको छ । संघका सचिव किशोर बगालेले चितवनको जनसंख्यालाई यहाँ उत्पादन भएको आधा दूधले पुग्ने बताए ।
चितवनलाई कति चाहिन्छ दूध ?
जिल्ला समन्वय समितिले चितवन जिल्लाको जनसंख्या ५ लाख ८० हजारको हाराहारीमा रहेको जनाएको छ । एक जना मानिसलाई दिनमा सरदर दुई सय ५० एमएल दूध चाहिन्छ । सचिव बगालेका अनुसार यही अनुपातमा हिसाब गर्दा चितवन जिल्लाको जनसंख्यालाई दिनको एक लाख ४५ हजार लिटर दूधले पुग्ने देखिन्छ । एक व्यक्तिलाई अनुमानित वर्षमा ९० लिटर दूध चाहिन्छ ।
दुई वर्षअघि साविक पशुसेवा कार्यालयले चितवन जिल्लामा दिनको दुई लाख ५० हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने जानकारी दिएको थियो । अहिले दिनको तीन लाख लिटर दूध उत्पादन भएको अनुमान संघले गरेको छ । यद्यपि, वास्तविक तथ्यांक घोषणा अघि आउने संघले जनाएको छ ।
साविक पशुसेवा कार्यालयका अनुसार चितवनमा ०७१/०७२ मा ७७ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो । ०७२/०७३ मा ७७ हजार ७९७ मेट्रिक टन उत्पादन भयो । ०७३/०७४ मा र ९० हजार २२१ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो । ०७४/०७५ मा ९५ हजार १२० मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो ।
चितवनमा कति छन् दुग्ध सहकारी ?
चितवन जिल्लामा संघमा आबद्ध भएका १३७ वटा दुग्ध सहकारी संघ छन् । हाल १०४ वटा संस्थामात्र नवीकरण भएका छन् । भरतपुर महानगरमा ५२, रत्ननगरमा २१, कालिकामा आठ, खैरहनीमा २३, राप्तीमा ६ र माडीमा एउटामात्र दुग्ध सहकारी संघ रहेका छन् ।
चितवनका सहकारीमा संकलन भएका दूधहरु पोखरा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, हेटौँडालगायतका जिल्लामा पुग्छ ।
नजिक रहेका साना दुग्ध सहकारीहरु मिलेर जानुपर्ने खाँचो भएको अन्नपूर्ण दुग्ध सहकारी संघ केशरबागका अध्यक्ष भागीरथ तिमिल्सिनाले बताए । अन्नपूर्ण दुग्ध सहकारी जिल्लाकै ठूलो दुग्ध सहकारीभित्र पर्छ ।
सडकमा दूध पोख्न नपरोस् : किसान
जिल्लालाई छिट्टै दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिने कार्यक्रमले दूध उत्पादक किसान खुसी भएका छन् । उनीहरुले दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिरहँदा फेरि सडकमा दूध पोख्ने अवस्था नआओस् भन्ने कामनासमेत गरेका छन् ।
राप्ती नगरस्तरीय दुग्ध उत्पादक समन्वय समितिका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद थपलियाले आत्मनिर्भर घोषणासँगै किसानले दूधको मूल्य उचितरुपमा पाउनुपर्ने बताए । उनले फेरि किसानले सडकमा दूध पोख्ने अवस्था आउन नहुने बताए । तोरीखेत दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष बैकुण्ठराज पौडेलले किसानहरु एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बताए ।
केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक संघका उपाध्यक्ष रामेश्वर पोख्रेलले दूधको मूल्य समायोजन गर्दा दूध सडकमा पोख्ने अवस्था फेरि दोहोरिन सक्ने भएकाले यसतर्फ सजग हुनुपर्ने बताए । संघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिहर सुवेदीले दूध एकद्वार प्रणालीबाट बिक्री गर्न सुझाव दिएका थिए ।
चितवनमा उत्पादन भएको झन्डै ६५ प्रतिशत दूध जिल्लाबाहिर गइरहेको छ । चितवनको दूध डीडीसी, उज्ज्वल डेरी, सीताराम डेरी, हेटौँडा डेरीलगायतले उठाउने गरेका छन् । सरकारले मुलुकलाई नै अण्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । धेरै वर्षदेखि चितवनमा मिल्क होलिडे भएको छैन ।